९ फाल्गुन २०७४ | February 22, 2018
नग्मा श्रेष्ठ नेपालबाट पहिलोपल्ट ‘मिस युनिभर्स’मा सहभागी हुदै
Saturday, 23 Sep, 2017 12:00 AM
काठमाण्डौ -मिस नेपाल– २०१६ मा मिस अर्थको टाइटल जितेकी नग्मा श्रेष्ठ विश्व चर्चित सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मिस युनिभर्स’मा सहभागी हुने भएकी छिन्। आउँदो नोभेम्बर २६ मा अमेरिकाको लास भेगासमा हुन गइरहेको ६६ औैं मिस युनिभर्समा उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकी हुन्।
नेपालले पहिलोपल्ट यो प्रतियोगितामा सहभागि हुने अवसर पाएको हो। मिस नेपालको आयोजना गर्दै आएको ‘द हिडन ट्रेजर’ले यो अवसर पाएको हो। राजधानीको होटल अन्नपूर्णमा आयोजित हिडन ट्रेजरको २२ औं तथा मिस नेपालको २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नग्मालाई पहिलो मिस नेपाल युनिभर्सको घोषणा गर्दै यो अवसर प्रदान गरियो। हिडेन ट्रेजरका अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतिले नग्माको शिरमा ताज पहिरिदिएका थिए र उनलाई ‘मिस युनिभर्स’मा पठाउने निर्णय गरेको घोषणा गरेका थिए। नग्मा प्रतियोगिताका लागि नोभेम्बर–५ मा अमेरिका जानेछिन्।
द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खड्गी पक्राउ, मानव तस्करी मुद्दामाम्याद थपियो
कमेडी प्रधान फिल्म मेरो पैसा खोई ? को ट्रेलर दमदार, वर्षा राउत यौनकर्मीको भुमिकामा
बाहुवलीका हिरोलाई ६ हजार युवतीले विहेको प्रस्ताव गरेपछि...
ज्योती मगरले कपडा उतारेपछि......
रेखा थापालाई थाहा छैन आफ्नै पार्टीको नाम !
नामिबियामा चम्किएका क्रिकेटरलाई एक लाख
आठौं राष्ट्रिय खेलकुदको लोगो सार्बजनिक
माओवादी बादलको नेतृत्वमा सरकारमा जाने